အထူးကဏ္ဍ Archives | Page 11 of 31 | Frontier Myanmar
အထူးကဏ္ဍ, တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, ယဉ်ကျေးမှု
"ကလေးတွေ ပညာသင်ခွင့်ရဖို့ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားတယ်" မစ္စ ဖရန်ဆက်စ်ကွန်
ရန်ကုန်မြို့၊ ချတ်ထရီယမ် ဟိုတယ်မှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်မှာ ကျင်းပတဲ့ Music for Myanmar ရန်ပုံငွေပွဲကို Link for Aid ပရဟိတအဖွဲ့က စီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ယင်းပရဟိတအဖွဲ့ တည်ထောင်သူ ခရီးသွားစာရေးဆရာမ မစ္စ ပါမီလာ မက်ကုတ် ဖရန်ဆက်စ်ကွန် Pamela McCourt Francescone က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ရန်ပုံငွေဂီတပွဲအကြောင်း Frontier ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရားရုံးတော်ပေါ်က ဘာသာစကား အခက်အခဲ
ဗမာစကားကို ရုံးသုံးအဖြစ်ပြဌာန်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက တရားရုံးတော်တွေမှာ ဗမာစကားမပြောတတ်တဲ့ တရားရင်ဆိုင်နေရသူတွေဟာ ဘာသာပြန်အခက်အခဲတွေ ကြုံနေရပါတယ်။ ဒီပြဿနာဟာ အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေတင်မကဘဲ မြန်မာပြည်တွင်းက ဗမာစကားမပြောတဲ့ ရာနဲ့ ချီတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေမှာလဲ ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက တမီးလ်စကားပြော.
News Feed, အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ, အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက်
ကွီးဖြိုးနှင့် တစ်မနက်တာ လိုင်းကားစီးခြင်း
ဒီနေရာမှာနေလာတာ နှစ် နှစ်ကျော်ပြီ မှတ်တိုင်မှာ ဒီလောက်များတဲ့လူအုပ်ကြီးကို မတွေ့ဖူးဘူး။ မှတ်တိုင်မှာ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေနေတဲ့ အဖွားကြီးတွေတော့ တွေ့ရတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း အော်တယ် “စပါယ်ယာကို မေးစီးကြပါ၊ စပါယ်ယာကို မေးစီးကြပါ” တဲ့။ မြတ်ကျော်သူ ရေးသားသည်။ ညကတည်းက အိပ်မပျော်တာ မနက်အထိပဲ။ နိုးတဝက်၊ ပျော်တဝက်နဲ့။ မနက်ကျရင်.
News Feed, အထူးကဏ္ဍ, စီးပွားရေး
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အများပြည်သူ ပို့ဆောင်ရေးစနစ်သစ်ကို ယခုလလယ်တွင် ယာဉ်ဟောင်းများဖြင့်သာ စတင်မည်
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃ ရန်ကုန်မြို့၊ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို လက်ရှိပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်လိုင်းများမှ ယာဉ်ဟောင်းများဖြင့် ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင် ပြေးဆွဲတော့မည်ဟု ရန်ကုန်အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှုး ဒေါက်တာမောင်အောင်က Frontier ကို ယနေ့ ပြောကြားသည်။ မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဖြင့် ပြေးဆွဲနေပြီး ဝေဖန်မှုများစွာ.